Baiboly pejy 706 - Ny Baiboly
Voalohany < 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka
Fanambaràna toko 6 (tohiny)
4Dia nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka, ary ilay nitaingina azy dia navela hanesotra ny fihavanana amin'ny tany, mba hifamonoan'ny olona, ka nomena sabatra lehibe izy.
12Nony nosokafany ny tombo-kase fahenina, dia hitako, fa indro nisy horohoron-tany mafy, ary ny masoandro tonga mainty toy ny akanjo malailay volom-biby; ny volana manontolo nanjary toy ny rà; 13ary ny kintan'ny lanitra niraraka tamin'ny tany, toy ny voan'aviavy manta mihintsana fa voahozongozon'ny rivotra mafy. 14Ny lanitra niampirina toy ny horonan-taratasy, ary ny nosy amam-tendrombohitra rehetra nesorina tamin'ny toerany. 15Ny mpanjakan'ny tany, ny lehibe sy ny mpifehy arivo, ny mpanan-karena sy ny olo-mahery, ary ny andevo sy ny olom-potsy dia nisitrika tany amin'ny zohy sy vaton'ny tendrombohitra, 16ary nilaza tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy hoe: Mianjerà aminay, ka afeno amin'ny tavan'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny Zanak'ondry izahay; 17fa tonga ny androm-pahatezerany lehibe, ka iza no mahajanona?
13Tamin'izay, ny iray tamin'ireo Anti-dahy nanao tamiko hoe: Iza moa ireo miakanjo fotsy, ary avy aiza no nihaviany? 14Dia hoy ny navaliko azy: Hianao no mahalala, Tompoko. Ary hoy izy tamiko: Ireo no avy tamin'ny fampijaliana lehibe, nanasa sy namotsy ny akanjony tamin'ny ran'ny Zanak'ondry. 15Koa indreo izy eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, namompo azy andro aman'alina ao an-tempoliny, ary hamponenin'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ao an-tranony. 16Tsy ho noana na hangetaheta intsony ireo, ary tsy hampaninona azy na hainandro na zava-mandoro hafa. 17Fa ny Zanak'ondry, izay mipetraka eo afovoan'ny seza fiandrianana, no ho Mpiandry azy, sy hitondra azy ho amin'ny loharanon'aina, ary Andriamanitra no hamaoka ny ranomaso rehetra amin'ny masony.
13Nanaraka izany dia nijery aho, ary nandre feom-boromahery anankiray nanidina teny afovoan'ny lanitra, niantso tamin'ny feo mahery hoe: Loza, loza, loza ho an'izay monina eny ambonin'ny tany, noho ny feon'ny trompetra telo sisa izay efa hotsofin'ny anjely.
Pejy: Voalohany < 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3575 seconds